Masangano Oshushikana neMhirizhonga Iri muZanu PF neMDC-T yaVaChamisa
Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kukurudzira vemapato makuru kuti vaiite sarudzo murunyararo dzekutsvaka vachamirira mapato aya musarudzo dzichaitwa munyika.
Vachitaura pamusangano waitwa ne National Association of Non –Gvernmental Organisations wekuzeya nzira dzekudzivirira mhirizhonga mumapato, vemasangano ekodzero dzevanhu vanoti mvonga mubopoto iri kuitika muZanu PF ne MDC-T inotungamirwa naVaNelson Chamisa musarudzo dze primary elections haina kunaka.
Amai Sungano Zvarebwanashe, nhengo yeMasvingo United Residence and Rate Payers Alliance, vakurudzira vemapato kuti vasaita mhirizhonga pakutsvaka vamiriri vavo.
VaGilbert Sibanda, nhengo ye Zimbabwe Civic Education Trust, vatsinhirawo vachiti kunetsana nekurovana kuri kuita vemapato pachavo kunotyisa uye hakupi vanhu chivimbo chekuti sarudzo dzichaitwa murunyararo.
Asi VaDumisani Mungushini, mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, vanoti kunetsana nemhirizhonga iri kuitika mumapato achitsvaga vamiririri vavo kunogona kungoperera ikoko nekuti mutungamiriri wenyika, VaEmerson Mnangagwa, vakavimbisa kuita sarudzo dzenyika dzakachena uye dzisina bopoto.
Mutauriri we MDC-T muMasvingo, VaSimon Mupindu, vanoti vari kuita chirongwa chavo chekutsvaga vamiriri murunyararo.
Ukuwo mutauriri weZanu PF muMasvingo, VaRonald Ndava, vanoti kukakavadzana mubato ravo hakusi kuzoenderera mberi kana vosangano nemamwe mapato, vachiti vanenge vakabatana votsvaga rutsigiro kuvanhu murunyararo.
Asi vanoona nezvematongerwo enyika vanoti zviri kuitika mumapato ndidzo mviro mviro dzekutanga kwemhirizhonga pachaitwa sarudzo dzenyika.